Yehowa Nyankopɔn Kyekye Yɛn Werɛ Yɛn Ahohia Nyinaa Mu | Adesua
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Amis Angolan Sign Language Arabic Argentinean Sign Language Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Bolivian Sign Language Boulou Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cakchiquel (Central) Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Dangme Danish Digor Douala Dutch Ecuadorian Sign Language Edo Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language Fon French French Sign Language Ga Garifuna Georgian German German Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Hungarian Sign Language Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Jula Kabiye Kannada Kenyan Sign Language Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Korean Sign Language Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Mam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mexican Sign Language Mingrelian Mixe Mongolian Moore Motu Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Pidgin (Cameroon) Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Romanian Romanian Sign Language Russian Russian Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zimbabwe Sign Language Zulu
‘Awerɛkyekye nyinaa Nyankopɔn no kyekye yɛn werɛ yɛn ahohia nyinaa mu.’—2 KOR. 1:3, 4.
NNWOM: 38, 56
Adɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛhwɛ kwan sɛ aware ne abusua asetena betumi ama yɛn ho ahiahia yɛn?
Ɔkwan bɛn so na mpaebɔ boaa nnipa binom a Bible ka wɔn ho asɛm ma wonyaa awerɛkyekye?
Dɛn na wubetumi ayɛ de akyekye afoforo werɛ?
1, 2. Ɔkwan bɛn so na Yehowa kyekye yɛn werɛ wɔ yɛn ahohia mu, na awerɛhyem bɛn na n’Asɛm no ma yenya?
ABERANTE bi a ɔnwaree ne asafo mu panyin bi a yɛfrɛ no Stephen dii n’ahiasɛm bi ho nkɔmmɔ. Ɛha yi deɛ, yɛbɛfrɛ aberante no Eduardo. Ná ɔpanyin no yɛ ɔwarefo a n’ani afi. Ná Eduardo asusuw asɛm a ɛwɔ 1 Korintofo 7:28 no ho. Ɛhɔ ka sɛ: “Wɔn a [wɔware] no ho behiahia wɔn ɔhonam mu.” Eduardo bisae sɛ, “‘Ahohiahia’ bɛn na kyerɛwsɛm no reka ho asɛm no? Na sɛ meware a, mɛyɛ dɛn agyina ahohiahia no ano?” Ansa na Stephen rebua asɛmmisa no, ɔka kyerɛɛ Eduardo sɛ onsusuw biribi foforo a ɔsomafo Paulo kyerɛwee ho. Ɔsomafo no kyerɛwee sɛ, Yehowa ne “awerɛkyekye nyinaa Nyankopɔn, nea ɔkyekye yɛn werɛ yɛn ahohia nyinaa mu.”—2 Kor. 1:3, 4.
2 Nokwasɛm ne sɛ, Yehowa yɛ Agya a ɔdɔ yɛn na ɔkyekye yɛn werɛ bere a yɛrehyia ɔhaw. Ebia wo nso, Onyankopɔn nam n’Asɛm no so aboa wo na wama wo akwankyerɛ mpɛn pii. Yebetumi anya awerɛhyem sɛ, Onyankopɔn pɛ sɛ esi yɛn yiye sɛnea na ɔpɛ sɛ esi n’asomfo a wɔtenaa ase tete no yiye no.—Kenkan Yeremia 29:11, 12.
3 Sɛ yehu nea ɛkɔfa yɛn haw anaa yɛn ahohia ba a, ebetumi aboa yɛn ama yɛatumi agyina ano. Saa ara na sɛ yehu nea ɛde ahohia a yehyia wɔ aware ne abusua mu ba nso a, ebetumi aboa yɛn ama yɛatumi agyina ano. Ɛnde yemmisa sɛ, nneɛma bɛn na ebetumi ama yɛn ho ‘ahiahia yɛn ɔhonam mu’ sɛnea Paulo kae no? Nhwɛso ahorow bɛn na ɛwɔ Bible mu ne yɛn bere yi so a ebetumi aboa yɛn ama yɛanya awerɛkyekye a yehia no? Sɛ yenya nsɛmmisa yi ho mmuae a, ɛbɛboa yɛn ama yɛatumi agyina ɔhaw ano.
ƆHAW AHOROW A ƐMA AWAREFO ‘HO HIAHIA WƆN ƆHONAM MU’
4, 5. Nneɛma bɛn na ebetumi ama yɛn ho ‘ahiahia yɛn ɔhonam mu’?
4 Bere a Onyankopɔn bɔɔ nnipa baanu a wodi kan no, ɔkaa asɛm bi. Ɔkae sɛ: “Ɔbarima begyaw ne papa ne ne maame hɔ na ɔde ne ho akɔfam ne yere ho na wɔayɛ ɔhonam koro.” (Gen. 2:24) Yehowa kaa saa asɛm no bere a ɔkaa nnipa baanu a wodi kan no boom sɛ awarefo no. Nanso, esiane sɛ yɛnyɛ pɛ nti, sɛ obi ware na ɔrekyekye n’abusua a, obetumi ahyia ɔhaw. (Rom. 3:23) Ansa na ɔbea bi bɛware no, ebia na ɔhyɛ n’awofo anaa obi foforo ase. Nanso, sɛ ɔware a na wabɛhyɛ ne kunu ase. Onyankopɔn ama okunu tumi sɛ ɔnyɛ ne yere ti. (1 Kor. 11:3) Mmea bi wɔ hɔ a, sɛ wɔkɔ aware a, mfiase no ɛyɛ den ma wɔn sɛ wɔbɛbrɛ wɔn ho ase ama wɔn kunu. Mmarima bi nso, ahyɛase no, ɛyɛ den ma wɔn sɛ wɔde akwankyerɛ bɛma wɔn yere. Onyankopɔn Asɛm no ma yehu sɛ, ɛsɛ sɛ ɔyere gye tom sɛ ne kunu na ɛsɛ sɛ ɔma no akwankyerɛ na ɛnyɛ n’awofo. Afei nso, nsɛmnsɛm betumi asɔre wɔ awarefo no ne wɔn nsenom ntam, na ɛno betumi ama okunu ne ɔyere a wɔaware foforo no ho ahiahia wɔn.
5 Sɛ ɔyere ka kyerɛ ne kunu sɛ ɔnyem a, ɛno nso taa kɔfa dadwen bɛto wɔn so. Ɛwom sɛ nyinsɛn no ma awarefo no ani gye, nanso mpɛn pii no, wɔsan dwinnwen nyinsɛn mu haw ahorow a ebetumi aba ho. Ade foforo a awarefo no bedwinnwen ho ne wɔn sikasɛm. Afei nso, sɛ wɔwo abofra no a, ɛno nso de nsakrae pii ba. Ebia ɔbaatan no de ne bere ne n’adagyew pii bɛhwɛ abofra a wawo no no. Sɛ ɔyere wo foforo a, n’adwene kɔ abofra no so kɛse, enti ne kunu betumi ate nka sɛ onnya bere mma no. Ɛno da nkyɛn a, ɔbarima a afei na wabɛyɛ agya no nso benya asɛyɛde foforo a ɛsɛ sɛ odi ho dwuma. Nea enti a ɛte saa ne sɛ, wabenya obusuani foforo a ɛsɛ sɛ ɔhwɛ no na ɔma no nea ohia.
6-8. Sɛ obi repɛ ba na onnya bi a, ɔkwan bɛn so na ebetumi ama ne ho ahiahia no?
6 Awarefo binom wɔ hɔ a, wohyia ahohiahia foforo bi. Ɛne sɛ, wɔrepɛ ba denneennen nanso wonnya bi. Sɛ ɔyere no ntumi nwo a, ebetumi ama wabotow paa. Aware ne abawo nyinaa de ɔhaw na ɛnam. Nanso, sɛ obi repɛ ba na onnya bi a, ɛno nso betumi ama ne ‘ho ahiahia no ɔhonam mu.’ (Mmeb. 13:12) Bible mmere mu no, sɛ obi ntumi nwo a, na ɛyɛ animguase ma no. Bere a na Yakob yere Rahel ntumi nwo na ohui sɛ ne nuabea rewo mma no, ɛyɛɛ no yaw paa. (Gen. 30:1, 2) Aman bi wɔ hɔ a, wɔhwɛ kwan sɛ nkurɔfo bɛwo mma pii. Nnipa a wɔwɔ saa aman no mu taa bisa asɛmpatrɛwfo a wɔresom wɔ hɔ no nea enti a wonni mma. Ɛwom sɛ asɛmpatrɛwfo no ma wɔn mmuae a ɛtɔ asom, nanso nnipa a wobisa wɔn nsɛm no taa ka sɛ, “Ɛyɛ a yɛbɛbɔ mpae ama mo wae!”
7 Anaa susuw nea ɛtoo onuawa bi a ɔwɔ England no ho hwɛ. Ná ɔrepɛ ba denneennen nanso na onnya bi. Afei otwaa bra. Ɔkae sɛ, bere a ohui sɛ ɔrentumi nwo wɔ saa wiase yi mu no, ɛma odii awerɛhow paa. Ɔne ne kunu sii gyinae sɛ wɔbɛkɔ akogye abofra bi de no ayɛ wɔn ba. Nanso, ɔbea no kae sɛ: “Ne nyinaa akyi no, na midi awerɛhow. Ná minim sɛ, sɛ yekogye abofra bi de no yɛ yɛn ba a, ɛrenyɛ sɛ me ara me yam ba.”
8 Bible ka sɛ, ɔbea a ɔyɛ Kristoni ‘nam abawo so benya ahobammɔ.’ (1 Tim. 2:15) Nanso saa asɛm no nkyerɛ sɛ, sɛ obi wo a ɛno na ɛbɛma wanya daa nkwa. Mmom, nea ɛkyerɛ ne sɛ, sɛ ɔbea wɔ mma a ɔhwɛ wɔn, na ɔyɛ fie nnwuma ahorow ka ho a, ɛremma onnya bere nni nseku anaa ɔmfa ne ho nhyehyɛ afoforo nsɛm mu. (1 Tim. 5:13) Nanso ne nyinaa mu no, aware ne abusua mu haw betumi ama ne ho ahiahia no.
Sɛ wo dɔfo bi wu a, dɛn na wobɛyɛ de agyina yawdi no ano? (Hwɛ nkyekyɛm 9, 12)
9. Sɛ ɔwarefo bi hokafo wu a, adɛn nti na etumi teetee no paa?
9 Sɛ yɛka ahohiahia a aware de ba a, ade baako bi wɔ hɔ a ebia yɛn adwene ntaa nkɔ so. Ɛno ne bere a obi dɔfo awu. Sɛ obi aware mu hokafo a ɔdɔ no wu a, etumi teetee no paa. Wei yɛ ɔhaw a ebia onipa a wahwere ne hokafo no anhwɛ kwan sɛ obehyia wɔ saa wiase yi mu. Kristofo gye di paa sɛ, Yesu bɔ a ɔhyɛe sɛ wobenyan awufo no bɛbam. (Yoh. 5:28, 29) Dɛn na saa asɛm no kyerɛ ma obi a ne hokafo awu? Ɛma onya awerɛkyekye paa. Wei yɛ ɔkwan foforo a yɛn Agya a ɔdɔ yɛn no nam n’Asɛm no so boa wɔn a wɔn ho rehiahia wɔn na ɔkyekye wɔn werɛ. Afei, momma yensusuw Onyankopɔn asomfo bi ho. Yɛbɛhwɛ sɛnea wɔtee nka bere a Onyankopɔn kyekyee wɔn werɛ ne mfaso a wonya fii mu.
NEA ƐMA YENYA AWERƐKYEKYE BERE A YƐREHYIA ƆHAW
10. Bere a Hanah kɔɔ ahohia mu no, dɛn na ɔyɛ de hwehwɛɛ awerɛkyekye? (Hwɛ mfonini a ɛwɔ adesua yi mfiase no.)
10 Ná Elkana yere a ɔdɔ no, Hanah, wɔ ɔhaw soronko bi. Ɛne sɛ, na Hanah ntumi nwo. Nanso, na Elkana wɔ yere foforo nso a wɔfrɛ no Penina. Ɔno de, na ɔwɔ mma. (Kenkan 1 Samuel 1:4-7.) “Afe biara,” na Penina yi Hanah ahi. Ɛno haw Hanah paa, na ɛma odii awerɛhow kɛse. Enti Hanah bɔɔ Yehowa mpae, na ɔkaa ne haw no kyerɛɛ no hwehwɛɛ awerɛkyekye. Nokwasɛm ne sɛ, ‘ɔbɔɔ mpae tenteenten wɔ Yehowa anim.’ Yemmisa sɛ, na Hanah hwɛ kwan sɛ Yehowa bɛyɛ n’abisade no ama no anaa? Ɛbɛyɛ sɛ na ɔhwɛ kwan saa. Ne nyinaa mu no, “n’anim ammotow bio.” (1 Sam. 1:12, 17, 18) Ná Hanah gye di sɛ Yehowa bɛma wawo mma anaasɛ obedi n’ahiade no ho dwuma wɔ ɔkwan foforo bi so.
11. Ɔkwan bɛn so na mpaebɔ betumi akyekye yɛn werɛ?
11 Bere tenten a yɛtɔ sin na yɛte Satan wiase yi mu no, yebehyia ɔhaw na yɛn ho behiahia yɛn. (1 Yoh. 5:19) Nanso, yenim sɛ Yehowa yɛ “awerɛkyekye nyinaa Nyankopɔn,” na ɛno ma yɛn koma tɔ yɛn yam paa! Sɛ yɛfa ɔhaw anaa ahohiahia mu a, ɔkwan baako a yebetumi afa so anya mmoa ne sɛ yɛbɛbɔ mpae. Hanah yii ne yam kaa ne haw nyinaa kyerɛɛ Yehowa. Yɛn nso, sɛ yɛn ho hiahia yɛn a, ɛnsɛ sɛ yɛbobɔ yɛn haw so kɛkɛ kyerɛ Yehowa. Mmom no, ɛsɛ sɛ yɛkotow srɛ no, kyerɛ sɛ, yefi yɛn koma nyinaa mu bɔ no mpae denneennen ma ohu nea yɛrefa mu ankasa.—Filip. 4:6, 7.
12. Dɛn na ɛboaa okunafo Hana ma onyaa anigye?
12 Ebia na yɛrepɛ ba na yennya bi anaa yɛahwere yɛn dɔfo bi. Wei betumi ama yɛn werɛ ahow paa. Sɛ saa na ɛte mpo a, yebetumi anya awerɛkyekye. Yesu bere so no, odiyifobea Hana kunu wu gyaw no bere a na wɔaware mfe nson pɛ. Bible nka sɛ wɔwoo mma. Enti yemmisa sɛ, efi bere a Hana kunu wui kosii sɛ odii mfe 84 no, dɛn na na ɔyɛ? Luka 2:37 ka sɛ: ‘Ná ɔmpa asɔrefie hɔ da, ɔde mmuadadi ne nkotɔsrɛ som awia ne anadwo.’ Nokwasɛm ne sɛ, Yehowa som maa Hana nyaa awerɛkyekye ne anigye.
13. Ma nhwɛso fa kyerɛ sɛ, sɛ yɛn abusuafo a wɔbɛn yɛn paa antumi ankyekye yɛn werɛ mpo a, nnamfo pa betumi ama yɛanya awerɛkyekye.
13 Sɛ yɛne yɛn nuanom bɔ denneennen a, ɛma yenya nnamfo pa. (Mmeb. 18:24) Paula kae sɛ odii mfe nnum no, ne maame gyaee nokware no. Wei maa ne werɛ howee paa. Ná ɛyɛ den ma no sɛ obegyina ɔhaw no ano. Nanso onuawa bi a ɔyɛ ɔkwampaefo a ne din de Ann maa n’ani kũũ Paula ho, na ɔhyɛɛ no nkuran. Paula kyerɛkyerɛɛ mu sɛ: “Ɛwom sɛ na Ann nyɛ me busuani, nanso sɛnea ɔmaa n’ani kũũ me ho no boaa me paa. Ɛma mitumi kɔɔ so som Yehowa.” Paula da so ara de nokwaredi resom Yehowa. Paula maame asan aba nokware no mu, na seesei ɔne no resom wɔ asafo no mu. Wei ama Paula ani agye paa. Ann nso ani agye, efisɛ wabɛyɛ sɛ Paula maame wɔ Yehowa som mu.
14. Wɔn a wɔkyekye afoforo werɛ no, nhyira bɛn na wobetumi anya?
14 Anigyesɛm ne sɛ, sɛ yɛma yɛn ani kũ afoforo ho a, etumi ma yɛn ankasa dadwen so tew. Anuanom mmea a wɔaware ne wɔn a wɔnwaree nyinaa nim sɛ, sɛ wɔka asɛmpa no kyerɛ nkurɔfo a, na wɔne Onyankopɔn abom reyɛ adwuma. Wei ma wɔn ani gye paa. Wɔn botae ne sɛ, wɔpɛ sɛ wɔyɛ nea Onyankopɔn pɛ de hyɛ no anuonyam. Ebinom gye di sɛ, sɛ wɔyɛ asɛnka adwuma no a, ɛma wɔn werɛ fi wɔn haw. Nokwasɛm ni, sɛ yɛn nyinaa ma yɛn ani kũ nnipa a wɔwɔ yɛn asasesin ne yɛn asafo mu ho a, yɛbɛboa ama baakoyɛ atena asafo no mu. (Filip. 2:4) Ɔsomafo Paulo yɛɛ wei ho nhwɛso pa. Ɔbɛyɛɛ te sɛ “ɔbaatan” maa wɔn a wɔwɔ Tesalonika asafo no mu no. Ná ɔte sɛ wɔn agya wɔ Yehowa som mu nso.—Kenkan 1 Tesalonikafo 2:7, 11, 12.
SƐNEA YƐBƐBOA MMUSUA AMA WƆANYA AWERƐKYEKYE
15. Henanom paa na ɛyɛ wɔn asɛde sɛ wɔde nokware no kyerɛkyerɛ mmofra?
15 Ade baako a ehia sɛ yesusuw ho ne sɛnea yɛbɛboa mmusua na yɛakyekye wɔn werɛ. Ɛtɔ da a, wɔn a wɔyɛ foforo wɔ asafo no mu tumi ma adawurubɔfo a wɔn ho akokwaw boa wɔn ma wɔde nokware no kyerɛkyerɛ wɔn mma. Wotumi ma wɔne wɔn mma nkumaa yɛ Bible adesua mpo. Kyerɛwnsɛm no ma yehu sɛ, awofo paa na ɛyɛ wɔn asɛde sɛ wɔkyerɛkyerɛ wɔn mma na wɔtete wɔn. (Mmeb. 23:22; Efe. 6:1-4) Ɛtɔ da a, ɛho hia sɛ anuanom boa awofo binom. Sɛ awofo no nya mmoa a ɛte saa a, wɔn ani sɔ paa. Nanso, ɛno nyi asɛyɛde a awofo no wɔ sɛ wɔkyerɛkyerɛ wɔn mma no mfi wɔn so. Ɛho hia paa sɛ awofo ne wɔn mma bɔ nkɔmmɔ na wohu wɔn yiye.
16. Sɛ yɛreboa mmofra a, dɛn na ɛsɛ sɛ ɛtena yɛn adwenem?
16 Sɛ ɔwofo bi si gyinae sɛ ɔbɛma obi ne ne mma asua ade a, ɛnsɛ sɛ onii no yɛ n’adwene sɛ obegye awofo no asɛyɛde afi wɔn nsam. Ɛtɔ mmere bi a, wotumi ka kyerɛ Ɔdansefo bi sɛ, ɔne mmofra a wɔn awofo ani nnye nokware no ho nsua ade. Nanso, ɛsɛ sɛ Ɔdansefo no ma ɛtena n’adwenem sɛ, ɔne mmofra no sua ade a, ɛnkyerɛ sɛ mmofra no abɛyɛ ne mma. Sɛ Ɔdansefo no ne mmofra no resua ade a, ɛbɛyɛ papa sɛ wɔyɛ adesua no wɔ mmofra no fie. Ɛsɛ sɛ ɔhwɛ sɛ mmofra no awofo anaa Ɔdansefo foforo a wanyin wɔ hɔ. Wobetumi nso asua ade no wɔ baabi a ɛfata na nkurɔfo behu wɔn. Ɛba saa a, obiara rennya biribi nnyina so nka sɛ wɔreyɛ ade bɔne bi. Yɛhwɛ kwan sɛ asɛyɛde a Onyankopɔn de ama awofo sɛ wɔn ankasa nkyerɛkyerɛ wɔn mma Yehowa ho ade no, nkakrankakra awofo no ara beso mu.
17. Dɛn na mmofra betumi ayɛ de akyekye wɔn abusuafo werɛ?
17 Sɛ mmofra sua nokware Nyankopɔn no ho ade na wɔdɔ no, na wɔde n’afotu yɛ adwuma a, ɛma wotumi kyekye wɔn abusuafo werɛ. Nea wobetumi ayɛ de akyekye wɔn abusuafo werɛ no bi ne sɛ wɔbɛda obu adi akyerɛ wɔn awofo, wɔbɛboa wɔn wɔ fie, anaa wɔbɛboa wɔn ama wɔanya nneɛma a wohia. Mmofra betumi aboa abusua no ama wɔasom Yehowa yiye nso. Ansa na Nsuyiri no reba no, na Set aseni Lamek som Yehowa. Lamek a na ɔyɛ abusua ti no kaa ne babarima Noa ho asɛm sɛ: “Ɔbɛkyekye yɛn werɛ, yɛn adwuma ne yaw a yɛte wɔ yɛn nsa ano mu esiane asase a Yehowa domee no nti.” Saa nkɔmhyɛ no baa mu bere a Onyankopɔn yii nnome no fii asase so no. (Gen. 5:29; 8:21) Ɛnnɛ, mmofra a wɔsom Yehowa betumi akyekye wɔn abusuafo werɛ. Sɔhwɛ a abusua no rehyia nnɛ, ne nea daakye ano bɛyɛ den asen Nsuyiri no mpo, mmofra betumi aboa wɔn abusuafo ama wɔagyina ano.
18. Ahohiahia anaa sɔhwɛ biara a yebehyia no, dɛn na ɛbɛboa yɛn ama yɛde akokoduru agyina ano?
18 Yehowa nkurɔfo bɔ mpae, wodwinnwen nnipa a wɔn ho asɛm wɔ Bible mu ho, na wɔne wɔn ho bɔ denneennen. Wei ama Onyankopɔn asomfo ɔpepem pii anya awerɛkyekye wɔ wɔn ahohia nyinaa mu nnɛ. (Kenkan Dwom 145:18, 19.) Yenim sɛ awerɛkyekye nyinaa fi Yehowa. Enti ahohia biara a yɛbɛkɔ mu nnɛ anaa daakye no, yebetumi de akokoduru agyina ano.